TTSweet: ဂျူဂျူးနှင့် အလိုလိုက်ခြင်း
Posted by T T Sweet at 12:18 PM
I miss my mum after reading ur post...
ကလေးယူရင် သမီးကလေးဘဲ လိုချင်တယ်။ အမေ အဖော်ရတယ်။ အ၀တ်အစားလဲ အများကြီး ဆင်လို့ရတယ်။
မဒမ်ကိုး October 12, 2011 at 12:59 PM
ရှေ့ကစီနီယာတွေကိုကြည့်ထား လေ့လာထားမှပါပဲ မဖြစ်ပါဘူး တီဆွိရယ်း)
Vista October 12, 2011 at 1:41 PM
ကလေးတော့ အလိုလိုက်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး ကြောင်တွေခွေးတွေတော့ အလိုလိုက်တယ် ။ အရမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။
စည်းကမ်းတော့ ပေးမှ ထင်ပါတယ် ။ ကလေးဆုံးမတာမတတ်ပါဘူး ဟီး။
ဖိုးတုတ် October 12, 2011 at 2:00 PM
ဂျူဂျူက တစ်ဦးတည်းသမီးမို.ဆိုးနေတာ၊ ခလေး နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူလိုက်၊ ကိုယ်တော့ နောက်ထပ် ခလေး မလိုချင်ပေမဲ့ သူများကိုတော့ မြှောက်ပေးတတ်တယ်၊ ခွိခွိ
မေဓာဝီ October 12, 2011 at 4:33 PM
ဂျူဂျူလေးနဲ့ တီတီဆွိပုံလေးက ချစ်စရာ။ ဂျူဂျူက ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 12, 2011 at 6:15 PM
ပိုစ့်ထဲမှာ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာရနံ့က သင်းပျံ့နေတာဘဲ
သားသမီးတွေဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး မိခင်နေရာရောက်လာရင်တော့ မိဘရဲ့ မေတ္တာကို ပိုပြီး နားလည်လာရတာပါဘဲနော်
အခု ဂျူးဂျူးလေး မဆိုးတော့ဘူးဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
seesein October 12, 2011 at 7:04 PM
zzz ပြောသလို ငွေဧည့်သည် ကြေးဧည့်သည်လေးတွေ ထပ်ခေါ်လိုက်လေ.......
rose October 12, 2011 at 9:50 PM
အပေါ်ဆုံးက စကပ် အဖြူလေးနဲ့ ဂျုဂျုးပုံလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ သမီးတွေကို အလိုလိုက်တာ ရို့စ် မိဘတွေရောပဲ တီဆွိရေ...။ စာကျက်နေရင် ထမင်းစားပြီး ကိုယ့်ပန်းကန်တောင် ဆေးစရာ မလိုဘူး။ အားလုံး မိဘတွေပဲ အကုန်လုပ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ် တစ်ယောက်တည်းနေတော့ ဟင်းမချက်တတ်၊ ဘာမှ မလုပ်တတ်နဲ့ အခက်ကြုံရတာပေါ့။
susu October 13, 2011 at 12:00 AM
ဂျူဂျူ‌လေးက‌မေ‌မေဆွိ‌ကျွေးတာ "စားချင်ဝူး..စားချင်ဝူး" လြို့ငင်း‌ပေမဲ့
ကွကို စိတ်ဓါတ်ကျပြီး ပြန်သွားသည်..။
So cute Ju Ju lay in red and white.She looks slimmer now cos she is taller than b4.Both mom and her sweet heart are beautiful.
Sonata Cantata October 13, 2011 at 6:08 PM
ဟို အပေါ်က ကွကို ပေါက်လိုပဲ...
တို့များလည်း ငယ်ငယ်က အလိုလိုက်မခံရတော့
ကြီးကြီးငယ်ငယ် ဘယ်သူကို မဆို၊ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာကတော့
စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်နေတာထက်စာရင် ပိုအကျိုးရှိတယ်လို့
မြသွေးနီ October 13, 2011 at 8:32 PM
အိမ်က သားပြည့်လည်း ဂျီးများတုံးကြီးပဲ အစ်မဆွိရေ..။
ဒီအရွယ်ကြီး ရောက်နေပြီ အဖေက စိတ်ရှည်လက်ရှည် အသားများ နွှာ၊ မျှင်ပေးတယ်။ မြသွေးက အမြင်ကပ်လို့ ၀ါးဖတ်လေး ခွံ့ကျွေးပါလားရှင်ရယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ်.. ဟိ။ မိဘတွေအတွက်ကတော့ သားသမီးတွေအတွက် ဖြည့်ဆည်းလို့ မကုန်နိုင်အောင်ပါဘဲနော်..။
ကြည်မြန်မာ October 13, 2011 at 9:41 PM
မစံပယ်တော့ အရမ်းအလိုလိုက်လွန်းတာ မကြိုက်ဘူး..။ မစံပယ်တွေ့ဘူးသလောက် တစ်ဦးတည်းသော သားသမီးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ အဆင်ပြေတာ နည်းသလားလို့..။ ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကြတာ များတယ်..။ ခုလတ်တလောမှတ်မိတာဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့အတန်းတုံးက ပရောဂျက်အတူလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အစ်မကြီး..။ ဘာနေနေသူပြောသလိုပဲ လုပ်စေချင်တယ်..။ သူပြောတာကမှ အမှန်..။ နောက် သူ့အိမ်ကိုပဲ လူတိုင်းလာစေချင်တယ်..။ အကျိူးနဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြလည်း လက်မခံချင်ဘူး..။ သူ့အိမ်ကအဝေးကြီးဟာကို အားနာလို့ တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်တော့ သွားတာပေါ့..။ နောက် စာမေးပွဲနီးလာတော့ ဘယ်သွားနိုင်တော့မလဲ..။ အဲဒါမလာလို့တဲ့..။ တော်တော်ကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပါတယ်..။
မစံပယ်လည်း တူတွေ တူမတွေကို စည်းကမ်းကလနားနဲ့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အောင် ပျိူးထောင်ချင်တာလည်း အမှန်ပဲ..။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေမျက်ရည်ကျဖို့ မပြောနဲ့..။ နာမှာ တစ်ခုခုဖြစ်မှာကို စိတ်ထဲမှာ ခံစားလို့မရဘူး..။
တစ်ခါက ဘေးအိမ်ကခင်နေတဲ့အစ်ကိုတစ်ယောက်က မစံပယ်တူကို မစံပယ်ရှေ့မှာတင် ထိပ်ခေါက်တာ၊ သူတို့အဖေ (မစံပယ်အစ်ကို) ရှေ့မှာဆို ကဲလို့တဲ့..။ မစံပယ်ကြောင်အပြီး ဘာမှမပြောလိုက်နိုင်ဘူး..။ ကလေးဆိုမျက်နှာလေးကိုငယ်လို့၊ မျက်ရည်ကိုလည်သွားတာ..။ အဲဒီကတည်းက အဲဒီအိမ်နီးချင်းအစ်ကိုကြီးကို မစံပယ်မခေါ်တော့ဘူး..။ စိတ်နာသွားတာ..။ ကိုယ့်တူကို မညှာမတာလုပ်လို့..။
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် October 14, 2011 at 3:45 AM
သိပ်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားအမိလေးပါပဲ။ မိဘဆိုတာကတော့ တတ်နိုင်သလောက် အလိုလိုက်ကြမှာပါပဲလေ။ ချစ်တာကိုးးး။
PhyoPhyo October 14, 2011 at 4:29 AM
အမေနဲ့ သမီးလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။
မိဘမေတ္တာဆိုတာ အဲလိုပဲနေမှာပါ။ အလိုလိုက်မိမှာပဲ။
ဂျူဂျူးလေးလိမ္မာတယ် ဆိုတော့ မေမေဆွိက ပျော်မှာပေါ့။
သီတင်းကျွတ်မှာ ဂျူဂျူးလေးကန်တော့တော့ မေမေ နဲ့ ဖေဖေ မုန့်ဘိုးဘယ်လောက်ထွက်သွားလဲ။ :D
Anonymous October 14, 2011 at 3:37 PM
TT Sweet ရေ
ကျနော်တူလေးကတော့ ဘာကျွေးကျွေး မကြိုက်ဘူး မစားဘူး လုပ်နေကျဗျ။ တခါသား ဒီလောက်တောင် မစားချင်တဲ့ကလေး၊ ဆာတယ်လို့ ပြောမှ ကျွေးမယ်ဆိုပြီး လွှတ်ထားတာ တနေကုန် ဆော့တယ်ဗျာ။ ဆာတယ် တစ်ခွန်းမပြောဘူး။ ကလေးတွေ အစားအသောက် ချေးများတာကတော့ တော်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုံးက သိပ်မသိတက်လို့ဆိုးပေမယ့် ကလေးတော်တော်များများက သိတက်လာကြတာများပါတယ်။ ဂျူဂျူးလေးက လိမ္မာမှာပါ။
ကိုယ်.ကိုတွေ.အရတော. တဦးတည်းသောသားသမီးတွေက အဖော်မင်တော. အဖော်ဆိုသူတို.က အနာခံပေါင်းတာများတယ်။
တခြား ဘ၀တူအမေတွေကိုမေးကြည်.တော.လဲ အဲ.ဒီအတိုင်းချည်းဘဲကြားရတယ်။
သမီးလေးဆို တဦးတည်းသောသမီးလေးဖြစ်ပေမယ်. လူတိုင်းနဲ. (ကြီးကြီးငယ်ငယ်) တည်.အောင်ပေါင်းတယ်။ အမေ.အပေါ်မှာတော.ဆိုးချင်ဆိုးမယ်။ တခြားလူတွေကိုသူသည်းခံပြီးတော.ကိုပေါင်းတယ်။
အမေလုပ်တဲ.သူကလဲ တယောက်ထဲရှိတဲ.သမီးလေးကို ချစ်လွန်းတော.လဲ ဘယ်လောက်ဘဲလုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရ မောတယ်ကိုမရှိဘူး၊ သူ.ကိုအ၀တ်လေးကိုဆင်ပေးရတာ၊သူစားချင်တာလေးတွေ အမျိုးစုံလုပ်ပေးရတာ၊ချက်ပေးရတာ၊ အဲ.ဒါတွေနဲ.ဘဲပျော်နေရတာပါဘဲ။
အခုရေးတာတွေအကုန်လုံးကို တီဆွိတော. ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်မှာပါ။
ဘာလို.လဲဆိုတော. တီဆွိနဲ. ဂျုဂျုလေးအကြောင်းကို တီဆွိရေးထားတာတွေအကုန်လုံး ဟိုးဂျုဂျုငယ်ငယ်လေးထဲက အကြောင်းတွေကို အကုန်ဖတ်ထားတော. ၊တီဆွိတို.နဲ.အရမ်းတူတော.၊ တီဆွိကို တဦးတည်းသောသမီးတို.ရဲ.အမေ အချင်းချင်း အရမ်းနားလည်ပေးနိုင်လို.ပါ။
သူများသားသမီးတွေကို ကြည့်ပြီးပြောထားကြတာ ကိုယ့်သားသမီးကျတော့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းသီချင်းထဲကလို အပြစ်မမြင်ပါဘူး ချစ်ချင်တာပဲသိတယ် ဖြစ်သွား ရောပေါ့။ ဟား ဟား ဟား...........
လောက နိယာမ တောင်ဖြစ်နေပြီ။
San San Htun October 17, 2011 at 3:04 PM
တူတယ် တီတီဆွိရေ...အိမ်က စာကျက်နေရင် ဘာစားချင်လဲ အကုန်လုပ်ပေးတာ။ ဘာမှ ကူလုပ်ပေးစရာ မလိုဘူး။ ဒီလိုနဲ့စာပဲ ကျက်ချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့တာ...
San San Htun October 17, 2011 at 3:05 PM
တီတီဆွိက ချောတယ်..ဂျူးဂျူး ညက်ခုံးမွှေးက ဦးခြိမ့်နဲ့တူသလားလို့ ...း)
Shinlay October 19, 2011 at 3:35 AM
ဖတ်ပြီးတော့ အမေနဲ့ သမီးတို့ မေတ္တာကို ခံစားမိတယ်။
Soe Yu Nwe October 24, 2011 at 12:21 AM
ိစာလုပ်နေရင်ပြီးရော သမီး နဲ့ သားကို အရမ်းအ လို လိုက်တဲ့မေ ကြီး ကို သိပ်လွမ်း သွားပါ သည် :'( :'( ( BTW မေမေရော မီးမီး ပါချစ်ဖို့ ကောင်းပါသည် )